Quruxda madow ee madadaalo ee gabdhaha - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
1. Caleemaha midabka leh tattoo naqshadeynta fikradda gabdhaha qoorta
Meel kasta oo adduunka oo dhan ah qaabka shaati-galada ayaa ku ballanqaaday rag iyo dumar caqli-gal ah. Tilmaamku wuxuu ka sarreeyaa dad caan ah oo aan awood u siin karno yar yar oo aan ka mid ahayn dabeecadaha wax gaar ah ama kan kale.
2. Ubax iyo kabo fikradda naqshadeynta jimicsiga ee gabdhaha dhabarka
Marka ugu horeysa, waxaan aragnay raggii xukumayay qalabka tattooska, hase yeeshee mar dambe lama sii kordhineynin markaan aragno tiro badan oo gabdho ah oo qabta farsamada. Miyuu dhawaan sawirro dharbaaxo ah ku arkay?
3. cute ubaxyada iyo tufaaxa casriga ah ee loogu talagalay haweenka dhabarka
Gacmuhu wuxuu ku qabsan karaa shafaar balastar ah oo laga yaabo inuu u adeegsado aqoonsi noocyo kala duwan oo adiga kugu habboon.
4. Caleemaha midabka leh Fikradda tattoo mugdiga loogu talagalay gabdhaha gacmaha lafdhabarta
Ka sii badan markaad haysatid shimbir balastar ah oo shimbir ah oo ku duuban muruqyadaada. Farriinta ayaa si joogto ah u caddaynaysa mar kasta oo aad gashato.
5. Caanaha quudinta dheeriga ah ee quudinta garaac tattoo ku saabsan haweenka qaybta hoose
Taraamada shimbirku waxay soo gebogebeeyeen isku dhafka kala duwan ee aadanaha. Wax yar ka fiirso in shaxdan darajooyinkan ay u beddeshay mid aad u caan ah. Tani micnaheedu maaha in ragga ay si fiican u yaryihiin oo kaliya jacaylka balastarka.
6. Gacanta labalaab ee rabbo-gaduudka ah ee haweenka
Waad qaadan kartaa tattooadaada balastar-jilicsan ee heerarka soo socda marka aad ka dhigto mid xoog leh oo xiiso leh bawdadaada.
7. Caleen jecel iyo kabo garaac tattoo loogu talagalay gabdhaha
Saadaalinta dhoobada waxaa laga yaabaa in ay shakhsiyaadka ka fikiraan ubaxa. Waxaan leenahay indhaha balanta casriga ah oo tarjumaya waxyaabo badan oo naga siiya. Saaxiibnimada, waxaan ka wada hadli karnaa balastarka jaalaha ah; Xakameyntu waa caddaan ama dhimasho inta lagu jiro jacaylku waxaa lagu muujiyaa balastarka cas.
8. Caanaha fudud tattoo design naqshad haweenka dhabarka
Maanta, farshaxanada ayaa soo bandhigay habab wanaagsan oo loogu sameeyo sameynta duufaan u muuqda oo u muuqda maqaarka.
9. Cajiibka jilicsan ee lugaha leh ee fekerka fiidmeerka leh fariin, waan duuli karaa
Taraakada macaan ee lo 'ah waxay ku heleen inay noqdaan kuwo dhexdhexaad ah oo ka dhexjiraya saaxiibada tattoo. Saltoos laga sameeyay balastar waa mid cajiib ah, taasina waa sababta aan u aragno inta badan haweenka.
10. Fikradda naqshadeynta jilicsan ee taatuusha ee gabdhaha
Ku soo bax balastarka shimbiraha lugahaaga. Waxaad dooraneysaa sida aad u baahan tahay tattoo si aad u eegto lugahaaga.
11. Nashqad qurxin shimbir ah oo loogu talagalay haweenka ku jira shandada nuska ah
Hel waxoogaa naqshad leh marka aad tahay qof aad is-xayeysiinayso oo aad u bedesho xayawaankaaga tattoo-rigga. Waxaad shaki gelin doontaa jacaylka habka uu u eegi doono maqaarkaaga.
12. Ubaxyo casri ah iyo dhar-gogol-xaar ah oo ku yaala dhabarka dumarka
ku dhaji tattoostattoos gacantaDhaqdhaqaaqatattoo biyo ahtattoo dheemantattoos ubaxtattoos sleevejimicsiga bisadahaarrow Tattootattoos cagtacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahsawirrada raggagadaal u laaboTattoo Feathertaraagada kubbaddashimbir shimbirtattoos eaglelibto libaaxtattoos qosol lehtattoo ah octopusfikradaha tattooTattoo infinitytattoos saaxiib saxa ahgaraacista gacmahatattoos moontattoos iskutallaabtaTartoo ubax badanTilmaamta jaalaha ahsawirada malaa'igtakoi kalluunkamuusikada muusikadahenna tattoowaxaa la dhajiyay tattoostattoo tilmaantattoos qorraxdalammaanahatattoo indhahatattoo maroodigawaxay jecel yihiin tattoosTattoos Wadnahanaqshadeynta mehndiJoomatari Tattoostattoos taajkiitattoos qoortasawir gacmeedlaabto laabtatattoosshaatiinka shiidantattoos qabaa'ilkasawirada gabdhaha